I-FAQs -Raymin Display Products Co, Ltd.
Yintoni esifanele siyenze ukuze sisebenzisane?
Uninzi lwephepha lethu le-FSDU kunye nebhokisi yesipho esiqinileyo zenziwe ngokwesiko, zihlala siqala kuyilo loyilo kunye nobungakanani babathengi. Kule nqanaba, sidinga ulwazi lweenkcukacha zeemveliso zakho (ubungakanani, ubunzima, indlela yokubonisa) okanye usithumele iisampulu zemveliso ezimbalwa kwireferensi yoyilo
Ngaba unikeze isampuli?
Ewe, isampulu emhlophe okanye isampulu yombala ngokushicilelwa kwe-ink-jet. Senza uyilo ekuqaleni ukuba umthengi aqinisekise, emva koko sinike isampulu emhlophe ehlekisayo ukujonga ubungakanani, umgangatho wephepha, amandla okuxhasa ubunzima. Emva kokuba ulwakhiwo iqinisekisiwe, siya kunika abathengi umgca die-cut ukwenza wobugcisa. Ngokwesiqhelo, ngabathengi abenza umzobo womboniso okanye ibhokisi yokupakisha, ukuba umthengi unengxaki okanye akanaye umyili wokwenza oku, sinokubanceda ukuba banike isithako sobugcisa kuthi. Okulandelayo kukwenza isampulu yombala ngaphambi kwemveliso emininzi, ukuze ujonge umxholo wobugcisa obekwe ngokuchanekileyo kwibhokisi yokubonisa incinci kunye nebhokisi ekumgangatho ophezulu.
Yintoni na ixesha phambili isampula?
Ziintsuku 1-2 zesampulu emhlophe kunye neentsuku ezingama-3-4 zesampulu yombala.
Ngaba sinokusebenzisa i-ink-jet eprintiweyo yokubonisa iphepha okanye ukupakisha iphepha elisemgangathweni ukujonga umbala kwimveliso emininzi?
Hayi, kuba yahluke ngokupheleleyo kushicilelo lweglu kwimveliso yobunzima, ke umbala uya kwahluka kakhulu kwimibala yemveliso yobuninzi. Ukuba ufuna ukubona ukuba umbala uza kubonakala njani kwimveliso yobuninzi, siya kunika abathengi i-A3 okanye ubungakanani be-A4 ubungqina bokuprinta obuyi-95% kufutshane nombala kwimveliso yobuninzi.
Ngaba kufuneka sihlawule isampulu?
Ewe. Kuhlala kungama-50 eedola kwisampulu emhlophe kunye ne-100 $ kwisampulu yombala, kodwa oku kunokutsalwa kwixabiso elipheleleyo loku-odola xa i-odolo iqinisekisiwe,.
Ingaba uhambisa njani isampuli?
Sihlala sithumela nge-DHL yabathengi, i-UPS, iFedEx okanye iakhawunti ye-TNT. Ukuba awunayo i-akhawunti yekhuriya, singalungiselela ukuhanjiswa ngokusebenzisa inkonzo ye-arhente yekhuriya ebiza ixabiso eliphantsi kakhulu kunelikhuriya elisemthethweni, kwaye usibhatalele intlawulo yekhuriya, esiza kuyibhatala kwi-arhente yekhuriya. Ngale ndlela kubiza imali esezantsi kakhulu kodwa ithutyana ukufumana ipasile.
Yintoni ixesha loku-odola ngobuninzi?
Ziintsuku ezili-12 ukuya kwezi-15 kubo bobabini ukubonisa kwe-PDQ kunye nebhokisi esemgangathweni yephepha lemveliso.
Ngaba unikezela ngenkonzo yokudibanisa umboniso?
Ewe sakwenza njalo. Umthengi uthumela iimveliso zakhe kuthi, sinceda ukuhlanganisa iziboniso zabo zePOS kakuhle, ubeke iimveliso kunye nokuzalisa iibhokisi kwindawo engenanto ukuba kukho imfuneko. Okokugqibela sinobunzima bebhokisi engaphandle kwaye iibhodi ze-V zipakishe wonke umboniso. Ewe siyakubiza intlawulo encinci yabasebenzi ngale nkonzo.
Ukuba umthengi ujongene nobunzima bokuhlanganisa umbane, unganceda njani?
Sihlala sicinga ukuyila izakhiwo zokubonisa ze-POP ngokudibanisa ngokulula, kwaye sinike isiqwenga sephepha lesandla kwibhokisi nganye yokupakisha. Ukuba umthengi akanalo nofifi ngendlela yokuhlangana, siya kuthatha ividiyo emfutshane ukubabonisa indlela yokwenza inyathelo ngenyathelo